Iminikelo yaseNdiya emhlabeni, yikuphi okubaluleke kakhulu? | Ukuhamba kwe-Absolut
U-Ana L. | | India
La India, lelo lizwe eliyizwekazi uqobo ngokwalo kunoMbuso, ngenxa yalo umlando wezinkulungwane zeminyaka kanye nenani elikhulu lamasiko abake bahlala kuwo bangumsunguli wemikhakha eminingi yobuciko, yefilosofi, yomcabango, yesayensi nobunjiniyela ... ingasaphathwa eye-gastronomy yayo kanye nokunambitheka okunothile okusishiyile ngeminikelo eminingi evela eNdiya.
Lezi ngezinye ze iminikelo yaseNdiya emhlabeni, kusukela ku-Alexander the Great, waletha izindaba zokuthuthuka kwezobuchwepheshe, amasiko nobuciko okwenziwe kuleli zwekazi.
Ukuqala ngizokhuluma ngolimi, ngoba kubhekwa lokho Izilimi zaseYurophu zavela eNdiya. Futhi kunokufana okubalulekile phakathi kwezilimi ezine ezindala kakhulu ezaziwayo: iSanskrit, Latin, Greek and Persian.
Ngamafuphi nje, ngizokutshela ukuthi abaphathi begrama baseNdiya benza ukuhlukaniswa kwezinto ezazikade zakha iSanskrit, okuphothulwe ngolunye ucwaningo lokuqhathanisa amasistimu wefonotiki nohlelo lolimi lwaseYurophu. Isiphetho salezi zifundo zombili ukuthi bekukhona iProto-Indo-European, ulimi lwebele olujwayelene nezilimi ezifundwayo, okwenza ukwakhiwa kabusha kwezimpawu zefonetiki nezolimi okufanele ngabe zinazo. I-Indo-European ulimi olwakhiwe kabusha olusukela cishe ku-3000 BC. C.
Ngakho-ke ukusebenzisa lolu limi, olwaqala eminyakeni eyizinkulungwane eyedlule eNdiya, ngizokutshela ngeminye iminikelo yalesi siko kwabanye.
1 I-India njengomama wefilosofi
2 Isayensi neminikelo yaseNdiya
3 Ubuciko njengeminikelo evela eNdiya
I-India njengomama wefilosofi
I-India yaziwa njenge umama wefilosofi ngoba wanika umcabango womuntu ubuHindu, ubuBuddha, ubuSikh. ENtshonalanga kucatshangwa ukuthi ifilosofi yazalelwa eGrisi, kepha-ke leli siko lalilandela imisinga yokucabanga namathonya avela kwamanye amasiko.
Namuhla amafilosofi aseNdiya afundwa futhi amanye amathuluzi awo afakwa endleleni yethu yokucabanga, njengokuzindla okuthelelwayo, futhi intshisekelo enkulu kubantu abaningi emphakathini wanamuhla inguquko ephelele ngangokunokwenzeka, ngakho ukuthi uma kuphumelela, ngawodwana, kodwa ngokuhlanganyela, kuzoba ukuguqulwa okuphelele noma ukuzalwa kabusha.
Uyabona, indlela yokucabanga endala kangangokuba ngekhulu lama-XNUMX ifinyelela izigidi zabantu ngaphandle kwemingcele yayo.
Isayensi neminikelo yaseNdiya
U-Albert Einstein uvikele ukuthi umhlaba ukweleta kakhulu amaHindu kwazise yibona abafundisa ukubala. I-India ikweleta isayensi ye-algebra, uhlelo lwezinombolo ngokujwayelekile. Kuyacaca ukuthi u-zero ukweleta kakhulu u-Aryabhatta, isazi sokuqala sezibalo nesazi sezinkanyezi sangezikhathi zakudala zezibalo nezinkanyezi zaseNdiya. Waphila phakathi kweminyaka engu-476 no-550, wazalelwa eBihar, futhi izibalo aziqondakali ngaphandle komqondo wakhe we-0, yize engasebenzisanga isipelingi nezifundo zakhe zokuqagela inombolo uPi.
Ngaphezu kwalokho ngezibalo nesayensi yezinkanyezi inkathi yangaleso sikhathi ikhokha kakhulu kumuthi wendabuko waseNdiya, Ayurveda. Intshisekelo kulo muthi ibikhula ngenxa yoCwaningo olwenziwe ezikhungweni ezikhethekile, lapho kukhonjisiwe ukuthi imigomo ye-Ayurvedic iyahambisana nemithi yanamuhla futhi ingaqinisekiswa ngokwesayensi.
Ubuciko njengeminikelo evela eNdiya
Angifuni ukuqeda le ndatshana ngaphandle kokukhuluma nge iminikelo evela eNdiya enobuciko futhi ukuthi umhlaba wonke ukweleta isiko lamaHindu. Futhi sinenhlanhla ukucabanga ngobuhle besikhumbuzo esihle njengeTaj Mahal, isakhiwo esiyizakhiwo esakhiwe phakathi kuka-1631 no-1654 e-Agra ngumbusi, u-Shah Jahan, iNkosi Yomhlaba, njenge-mausoleum yentandokazi yakhe unkosikazi.
Kepha uma uthatha isinqumo sokuvakashela e-India, ngeke wehluleke ukuncoma eminye imisebenzi emikhulu eletha ubuhle emhlabeni wonke, njenge-Friday Mosque, phambi kweRed Fort, eDelhi. Idolobha elibomvana laseJaipur, neHawa Mahal yalo noma isigodlo semimoya, iSun Temple yaseKonarak, Fatehpur noma iQutab Minar, kepha uma kukhona itshe lesikhumbuzo engicabanga ukuthi umhlaba wonke kufanele ubonge ngalo i-India, yiRaj Ghat eNew Delhi, enikezelwe enkumbulweni kaMahatma Gandhi, elula indawo, cishe uhambo olugcwele umlando nomzwelo. Ngoba ohlwini lwabanethonya elikhulu ngekhulu lama-XNUMX, le ndoda nendlela yayo ethile yokuqonda ezombusazwe ayinakulibaleka. Ngaphandle kokungabaza, ungomunye wabalingiswa abaguqula umlando, hhayi nje kuphela ngenxa yenkululeko ye-India, kodwa futhi nangenxa yendlela, futhi lelo yiqhaza alibamba naso sonke isintu.
Ngabe uyazi eminye iminikelo evela e-India okufanele uyiqokomise?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Iminikelo yaseNdiya emhlabeni
Ngiyazi ukuthi kuneminikelo emi-5
Yebo, ngiyavumelana noZulema
Kuhle lokho ngumbono wami, ngethemba ukuthi ngingakusiza
ucwaningo beluluhle kakhulu ... ngiyabonga
hahahahaha napazo amantombazane amen me
Kungcono uthathe impi encane uyishaye
ngiyakuthanda atte indlovukazi yakho kusho
Kukhona i-null India yizwe elihle ngiyakutshela ngoba ngiyalazi futhi lapho ngihlangane nothando lwempilo yami uMario ngiyakuthanda
Phendula ai ngiyakuthanda atte tu reina
ukuxolisa okuyinkulungwane nangeanga ranga
futhi ngifaka isandla ekulahlekelweni ubuntombi bami obungabukeki kahle nowesifazane omnyama olapha ukugcwalisa i-reggarton kuyo yonke imilenze emi-4 ...
Kungukuzijabulisa ngithemba ukuthi awuthathi izinto ezingafanele zomfowethu njengoba zinjalo, noma ingabe uyijuju yengulube kangaka hahaha jujuju hahaha
yini ikhasi elidabukisayo elidabukisa ngempela, IGESI le-yave ...
IZINSUKU EZININGI ZOKUSEBENZA kusho
Isiko lamaNdiya lithakazelisa kakhulu, linezinto eziningi ongazithola futhi kufanele ulifunde kakhulu.
Phendula kokunye okushiwo ama-SiEl mArAlEs
ICAMILO APONTTE kusho
PEPE UKUPHATHA UMAMA WAKHE KABI
Phendula ku-CAMILO APONTTE
i-pag enhle kakhulu. nemifanekiso ye-bnas siyakuhalalisela! qhubeka kanjena ... c:
uthandaee! bebibisss…. ukuphawula ikhasi elihle futhi ungeze izinto eziningi ezifana
bna ikhasi like like omg! <3
<3 one direction best song ever, kiss you like si te gusta si no le das le como eres ikholwa
ngathi awuyena okholwayo
Abaqondisi vs. Velievers (Yo Directioner) uma ungaphawuli uthanda uJustin Bieber osea veliever
ANGIZANGE NGIQONDE LUTHO »» »
kahle uma ngiqonde i-xd encane
kuze kube bos
AmaHindu abonakala ngokuba ngabasolwa bokuqala benkolo namasiko.
okuningi kwe-minecraf .. i-netflix iyayidlala (i-rafa) …………………………………………….
ULuis Cané kusho
Ngikuthande kakhulu ukuthi uhambisane nendatshana nezithombe 🙂
Amasiko namasiko esiNgisi
Amathiphu osuku lokuqala endaweni entsha